एकैपटक दशैँभरलाई पुग्ने मासु पकाउनु गलत | Ratopati
एकैपटक दशैँभरलाई पुग्ने मासु पकाउनु गलत
personअञ्जु तामाङ exploreकाठमाडौं access_timeअसोज ३१, २०७५ chat_bubble_outline0
काठमाडौं–दशैँको समयमा खानपानमा धेरै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो स्वास्थ्य कस्तो राख्ने भन्ने कुरा हामीले खाने खानापानमा भरपर्छ । अझ दशैँमा खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने दशैँको समयमा पशुबध गरेकै दिन धेरै मासु पकाउने र दशैँभर प्रयोग गर्ने चलनसमेत रहेको छ। एकै पटक पकाएको मासु दशैँभर प्रयोग गर्नु झन्झट कम भए पनि स्वास्थ्यको हिसाबले फाइदाजनक नहुने डाक्टर पारस पञ्जियार बताउँछन् ।
चिकित्सकको भनाइलाई मान्ने हो भने सकेसम्म ताजा मासु खानु र कम खानु स्वास्थ्यको हिसाबले फाइदाजनक मानिन्छ ।
आज दशैंको अष्टमीको दिन । धेरैको घरमा खशी, बोकालगायत काटेर मासु तयार गरिएको हुनुपर्छ । यसरी तयार गरिएको मासु एक पटक पकाएर दशैँभर सेवन गर्नु स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले लाभदायी मानिँदैन ।
कुनै पनि चाडपर्व मनाउँदास्वास्थ्यको लागि पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा दैनिक रोगीको संख्या बढ्दै गइरहेको छ ।
डाक्टर पारस पञ्जियार भन्छन्, ‘हामीले खाने दैनिक खाना र चाडपर्वको समयमा स्वास्थ्यको लागि पनि विशेष ध्यान दिनुहुन म सबैलाई अनुरोध गर्दछु । खानेकुरामा ध्यान नदिँदा नेपालीहरु गम्भीर र ठूला रोगको सिकार बन्ने गरेका छन् ।’
यसकारण नखानुस् – डाक्टर पारस
डाक्टर पञ्जियार भन्छन्, ‘दशैँमा एक पटक पकाएको मासु दशैँभर किन खानुहुँदैन भने पकाएको मासुमा प्रोटिन नास हुँदै जान्छ । धेरै लामो समयसम्म स्टोर गरेर राखेको मासुमा विभिन्न भ्याक्टेरिया, भाइसर र फङ्गाइहरु बस्दै जान्छन् । त्यस्ता मासु सेवन गर्दा झाडापखाला लाग्ने सम्भावना हुन्छ । पोषण नास हुने र परजिवीहरुको बस्ने ठाउँ पनि त्यही मासुमा हुन्छ । जसले गर्दा त्यस्ता मासु सेवन गर्दा विभिन्न किसिमको समस्याहरु देखिन्छ ।’
उनी थप्छन्, ‘मेरो के सुझाव छ भने धेरै दिनसम्म मासु राखेर नखाएकै राम्रो । यदी स्वास्थ्यको हिसाबबाट हेर्नुहुन्छ भने त्यस्तो मासु राम्रो होइन ।’
तर सक्नु पर्छ भन्दैमा एकै दिनमा धेरै मासु खानु पनि स्वास्थ्यको लागि राम्रो मानिदैन ।
जस्तै मुस्लिमहरुले इदको दिन कुर्वानी गर्ने चलन छ । एक भाग आफूलाई राख्ने र ३ भाग अरुलाई बाँड्ने चलनलाई कुर्वानी भनिन्छ ।
यसरी सबैलाई बाँडेर खाँदा पनि स्वास्थ्यको हिसाबले यस्तो गर्नु सही अभ्यास मानिन्छ ।
‘हामीले पनि दशैँमा यसरी मासु तयार पारेको दिन धेरै मान्छेलाई बाँड्ने अर्थात बोलाएर खुवाउने हो भने त्यो मासु धेरै दिनसम्म बस्न पाउँदैन । धेरै दिनसम्म राखेको मासु खाँदा झाडापखाला, फ्रूड पोइजन, ग्यष्ट्रिक जस्ता समस्याहरु देखिन सक्छन् । राम्रोसँग नपाकेको मासु खाएमा मासुमा भएको किटाणु जिउँदै शरीरभित्र पस्ने र मानिसलाई समस्या हुन्छ ।’ डाक्टर पञ्जियार भन्छन् ।
सकेसम्म कलेजो नखादा राम्रो
विभिन्न अंगका मासु जस्तै मुटु, कलेजो, मिर्गौला, फोक्सो आदि पनि मासुको परिकारको रुपमा प्रयोग गरिन्छ ।
यी अंगका मासुमा कोलेस्टेरोलको साथै भिटामिन ए, डी, ई र केही मात्रामा भिटामिन बी पनि पाइन्छ । तामा, लौहतत्व, जिङ्क जस्ता खनिजतत्व पनि यी अंगमा प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ ।
कलेजो फलामको राम्रो स्रोत भए पनि यसमा रासायनिक पदार्थहरु फोहरको रुपमा जम्मा हुने भएकाले सकेसम्म कलेजो उपभोग नगर्दा राम्रो हुन्छ ।
यस्तै रातो मासु हाली बनाएको ससेज जस्ता परिकारमा लामो समय संरक्षण गर्न प्रिजरभेटिभ राख्ने भएकाले यस्ता मासुका परिकार खानाले क्यान्सरको सम्भावना हुनसक्ने कुरा अध्ययनले देखाएको छ ।
रातो मासु प्रोटिनको स्रोत भएपनि स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले उपयुक्त नभएको हुँदा थोरै परिमाणमा मात्र खानु हितकर हुन्छ ।
‘अस्पतालले भीड नियन्त्रण गर्न सक्दैन, नर्स र डाक्टर संक्रमित हुन थालिसके’
निषेधाज्ञापछि सरकारको अबको रणनीति के हुनुपर्छ ?
नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर शुरु भएको हो ?
‘डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट नेपालका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो’ (भिडियो)
सावधान ! यस्ता लक्षण देखिए मस्तिष्कघात हुन सक्छ
मृत्युपछि भाइरल भयो दिल्लीकी गर्भवतीको सन्देश –‘कोरोनालाई हल्का नलिनुस्...’
गंगा किनारमा ७१ संक्रमितको शव अलपत्र, आफन्तसँग जलाउने पैसा भएन
कपनमा रेमिट सञ्चालिकालाई चक्कु हानेर लुटपाट